Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » IATA: European Commission si n’echeghị eche
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị European Commission leghaara ndụmọdụ na ihe akaebe ndị otu EU na ụlọ ọrụ ụgbọelu gosipụtara anya.
European Commission na-eme mkpebi iji tọọ oghere oghere oge mbata na 50%.
Ndị na-ahụ maka iwu na UK, China, Latin America na Asia-Pacific etinyela ọnọdụ ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe.
Kọmịshọn ahụ nwere ebumnuche mepere emepe iji iwu oghere iji kwalite mgbake maka ụgbọ elu, mana ha tufuru.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) akara nke European Commission si (EC) mkpebi ịtọọ oghere oghere na-eji ụzọ mbata na 50% dị ka "enweghị eziokwu," ma kwuo na EC elegharala ndụmọdụ na ihe akaebe nke ndị otu EU na ụlọ ọrụ ụgbọ elu gosipụtara, nke mere ka ikpe dị ala karịa n'ọnụ ụzọ.
Nkwupụta EC pụtara na, site na Nọvemba rue Eprel, ndị ụgbọ elu na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọelu na-achịkwa oghere ga-eji opekata mpe ọkara usoro oghere ọ bụla ha jidere. Enweghị nwepu inyefe oghere na mbido oge na-enye ndị ụgbọelu ohere ka ha dabaa usoro iheomume ha ma ọ bụ mee ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ rụọ ọrụ. Tụkwasị na nke a, iwu nke 'ike majeure', nke a na-akwụsị ịchịkwa oghere ma ọ bụrụ na ọnọdụ pụrụ iche metụtara ọrịa COVID dị, agbanweela maka ọrụ intra-EU.
Nsonaazụ mgbanwe ndị a ga - abụ igbochi ikike ụgbọ elu iji rụọ ọrụ na ịdị nkọ dị mkpa iji zaghachi ọchịchọ na-enweghị atụ na ngwa ngwa na-agbanwe, na-eduga na ụgbọ elu na-ala n'iyi na enweghị isi. Ọ ga-emekwa ka nkwụsi ike ego nke ụlọ ọrụ ahụ daa mbà ma gbochie mgbake nke netwọọdụ njem ụgbọelu zuru ụwa ọnụ.
“Ọzọkwa, Kọmịshọn ahụ egosila na ha amaghị nke bụ eziokwu. Industrylọ ọrụ ụgbọ elu ka na-eche nsogbu kasị njọ n'akụkọ ihe mere eme ya. Kọmịshọn ahụ nwere ebumnuche mepere emepe iji iwu oghere iji kwalite mgbake maka ụgbọ elu, mana ha tufuru. Kama, ha gosipụtara nlelị maka ụlọ ọrụ ahụ, na ọtụtụ ndị otu so na-agba ume ugboro ugboro ihe ngwọta dị nro karị, site na isi ike na-agbaso amụma nke megidere ihe akaebe niile enyere ha. Willie Walsh, Onye isi Director IATA.
Arụmụka Kọmịshọn ahụ bụ na mgbake okporo ụzọ intra-EU n'oge ọkọchị a gosipụtara na ọnụ ụzọ 50% na-enweghị mbelata. Nke a na-efe ihu nke ihe akaebe pụtara ìhè nke enweghị nchekwube maka njem okporo ụzọ na-achọ oge oyi a, nke ndị isi EU so na IATA na ndị otu ya nyere.